Hogaamiyihii ugu horreeyay ee dowlad Carbeed oo booqday Dimishiq tan iyo sanadkii 2011.
David Shinn oo walaac ka muujiyay burbur ku yimaada xukuumadda Addis Ababa.
Monday December 17, 2018 - 11:19:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Booqasho kedis ah ayuu magaalada Dimishiq ee caasimadda wadanka Suuriya ku tagay madaxweynaha wadanka Suudaan Cumar Xasan Al-bashiir, kaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay halkaas.
Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda Suudaan Cumar Xasan Al-bashiir ayaa gaaray magaalada Dimishiq, waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay madaxweynaha nidaamka Nuseyriyada Bashaar Al-Asad.
Warbaahinta ayaa soo bandhigayay labada madaxweyne oo si kal iyo laab ah isku marxabaynaya, waxaana Al-bashiir loo sii galbiyay madaxtooyada uu magaalada Dimishiq ka deganyahay Bashaar Al-Asad.
Shira jaraa’id oo wadajir ay u qabteen Al-Asad iyo Al-bashiir ayay ku sheegeen in xiriirka labada dowladood ay sii xoojin doonaan, islamarkaana ay si mideysan ay uga wada shaqeyn doonaan xoojinta cilaaqaadka labada dowladood.
Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al-bashiir ayaa sheegay in nidaamka Bashaar uu la kulmay shirqoollo badan, balse uu adkeystay, lana gaaray waqtigii shacabka Suuriya ay go’aan ka gaari lahaayeen masiirkooda, taas oo u muuqata mid uu sharciyad ku siinayo gabood fallada uu Nidaamkaas u geystay todobadii sano ee lasoo dhaafay shacabka muslimka ah ee Suuriya.
Bashaar Al-asad, wuxuu dhankiisa sheegay in dowlado badan oo carbeed ay isku dayeen iney maquuniyaan jiritaanka nidaamkiisa, balse iyagu ay weli aaminsanyihiin wuxuu ugu yeeray carabnimada.
Shacabka Suuriya ayaa aad uga soo horjeestay booqashada madaxweynaha Suudaan uu ku tagay magaalada Dimishiq, taas oo ay ku tilmaameen iney tahay mid muujineysa sida dowladda Suudaan ay ugu faraxsantahay dhibaatada todobo sano jirstay ee Bashaar Al-asad uu ku hayo shacabka Suuriya.
Waxaa laga cabsi qabaa xaaladda ay ku dambeyn doonaan qoysas badan oo kasoo jeeda Suuriya, kuna sugan dalka Suudaan, kuwaas oo ay dhici karto in loo gacan geliyo Nidaamka, maadaama uu nidaamku u arko dadkaas iney yihiin kuwa kasoo horjeeda jiritaankiisa.
Madaxweynaha dowladda Suudaan Cumar Xasan Al-bashiir ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee carbeed ee booqasho rasmi ah ku taga magaalada Dimishiq, tan iyo sanadkii 2011-ka, kolkaas oo shacabka Suuriya billaabeen kacdoon jihaadi ah oo ka dhan ah nidaamka Bashaar Al-asad.
Video: Ra'iisul wasaare Madax ka ah dowlad haysata Hubka Niyugleerka oo Osama Bin Laden ku tilmaamay Shahiid.